screw fasteners, fasten stainless steel fastener, nickel alloy fastener - Winrock
Kutsvaira kweOiri neGasi
zvinhu zvakasvibirira kuratidza
Winrock inotora shanduro itsva uye teknolojia, kugadzira marimi emarudzi ose, uye zvigadzirwa zvakaratidzwa mukati memunyika uye kune imwe nyika.
Winrock inoshumira zvakasiyana-siyana zvemabhizimisi nemisika. Pasinei nokuti uri kutsvaga kutsvaga kwemazuva ose kana uri kutsvaga mhinduro chaiyo, tine zvatinoda!
Winrock inopa technic data sheets yezvinhu zvose zvinogadzirwa, Unogona kuona data iri paIndaneti, kana kutora fomu yeparamende yekusununguka ...
Winrock iyanzvi hwekutengesa kwekugadzirisa zvakananga, inogadzira hofisi paShanghai muguta, kugadzira zvigaro iri muguta re Dongtai, Jiangsu Province. Kugadzirwa kunonyanya kushandiswa kweMafuta neGesi, Petrochemical, Power generation, Pressure vessel, Valve ... Tinogona kumhanyisa semitambo yepasi rose kana kuti zvido zvinokosha ...
inconel 718 625 600 601 pikisa hex stud mhepo yakagadziriswa nemuti M6 M120
Simba redu rekushandisa rinosanganisira: Quality Flexibility International chiitiko Pasi-nguva kuendesa Kuputsika kwekushumira Basa rakasimbiswa kuti rienderane nevatengi 'zvavanoda: Kuenzanisira Kushambadzira kwevashandi Nekuwedzera kuongorora Muzvinhu zvisingawanzogadziriswa Nemagetsi asina kujairika Kusungirira kunyanya zvinhu zvakagadzirwa kune dzimwe nyika. Thread forms: All fasteners can be provided with ...
china supplier 304 steel stainless steel hex socket shoulder bolt 10mm shoulder dia 12mm
Tsanangudzo 1): M2, M3, M4, -4-40 / 6-32 2) Dhoni yekoni + Zinc Yakagadzirwa + Sesi isina tsvina + SUS300 Passivation. 3) Maererano neDrawing kana Samples. 4) OEM yakagamuchirwa. Zvimwe zvipfeko uye mabhuti: 1: High quality, Mutambo wekukwikwidza, basa rakanaka kwazvo nekukurumidza kutumira. 2: Kusiyana kwakasiyana kwezvaunosarudza. 3: Zvose zvakagadzirwa zvakapfuura mutemo wepasi rose. 4: Big stock: Pamusoro pe 800 tani dzemashoko ose akataurwa. Nezvedu ...
M3, M6 titanium screw flat musoro musoro musoro cap cap titanium flange screws for chirurgical spinal
Mushandisiro Wechigadziro Ndezvipi zvinobatsira zveHFF? 1. Isu tiri muongorori chaiyo 2. Quality Assurance: ISO9001-2008 Yakagadziriswa TUV SGS, CE yakavimbiswa, yakakura nzira yekugadzira hutano / system 3. Professional Engineering Capability 4. Kunonzwisisa uye kukwikwidzana mutengo 5. Zvose zvinyorwa zviduku nemirairo mikuru inogamuchirwa 6. Zvinopfuura makore 20 akawana mu ...
Kana Une Mimwe Mibuzo, Ndapota Regai Tive Nechizivo. Tichakupindura Mukati Memaawa 12
cnc kushandiswa kushandiswa kwemashini isina kushandiswa threaded fasteners
asiya mutsvuku M5 x 40mm 12.9 jira resimbi hex tsona musoro cap screws bolt
nhengo yesimbi yechipfuva kubva kumusoro wemhizha
tsvina isina kusimba torx flat head screws / M5 torx screws
Hofisi Iwedzera: Room 501 Building 36 No.312 Shanghai China